PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - AmaPolicy akusiza ngale kokwazisa umshwalense
AmaPolicy akusiza ngale kokwazisa umshwalense
WE HAVE A LARGE VARIETY OF ENGINES AND GEARBOXES TO CHOOSE FROM
UMA uthenga imoto entsha noma esike yasebenza, kubalulekile ukwazi ngalama policy angakusiza uma uvelelwa inkinga ngemuva kwesikhathi ube naleyo nemoto.
Lama policy ayakwazi nokukusiza ngisho lungakapheli usuku oyithathe ngalo imoto egaraji othenge kulo. Nanka amanye awo ngezansi: - Credit Life Cover: Lena yi-policy esiza umndeni wakho noma labo obathandayo uma kwenzeka udlula emhlabeni ngoba ikhokhela isikweletu semoto ngokugcwele ukuze bangasali nenkinga yokukhokhela imoto yakho.
Uma uba nesifo esenza ukuthi ungakwazi ukusebenza, le policy ikhokha isitolimende sakho sezinyanga ukwenzela ukuthi ungabi nayo ingcindezi yemali.
Uma futhi ukhubazeka le policy iyaqhubeka ikhokhele istolimende sakho. ·Shortfall cover: Uma kwenzeka imoto iba sengozini bese beyicisha emabhukwini (write-off ) noma uma intshontshwa ingatholakali, le policy ikhokha imali yesikweletu esisalayo uma umshwalense usukhokhile.
Kuyenzeka umshwalense ukhokhe imali yesivumelwano esikwi- Insurance policy egcina isala incane kunemali oyikweleta ibhange. Lo mehluko wenani ube usukhokhwa yi shortfall cover. ·Scratch ne dent cover: Uma imoto ilimele, umshwalense uyakwazi ukuyilungisa bese befaka kumarekhodi abo ukuthi bayilungisa bese besebenzisa leyo mininingwane uma bebuyekeza imali okumele uyikhokhe ngenyanga.
Yingakho abantu abaningi bebalekela ukuyisa imoto kumshwalense uma ilimele kancane noma ikwebhekile.
Basuke benqena ukuthi leso senzo sizongena emabhukwini bese bekhokha kakhulu.
IPolicy ye scratch nama dent yona ihlukile kunomshwalense ngoba ingangeni emabhukwini emshwalense kodwa kuba yinto le policy eyilungisayo ngaphandle kokutshela umshwalense wakho.
Lokhu kusiza imoto yakho ihlale ibukeka, iyintsha ngaso sonke isikhathi njalo.
Le policy ibhekela izimo ezinje:
Uma umzimba ukwebhekile, uma ine-dent encane noma ilinyazwe amatshe amancane kwi-bonnet.
Ukukwebheka okuncane ku bumper. Ukukwebheka ezibukweni Ama-dent amancane emzimbeni
Ukuklwebheka nokulimala kwamarimu emoto yakho.
UMA imoto ineScratch ne-dent cover uyakwazi ukufaka isicelo sokuthi ulungiselwe ngaphandle kokuxhumana nomshwalense wemoto